लगानी – Banking Khabar
बैंकिङ खबर । नेपालकै पहिलो पूर्वाधार विकास बैंकको रुपमा स्थापना भई हालै औपचारिक कारोबार प्रारम्भ गरेको नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले आफ्नो लगानीको सुरुवात गरेको छ । कास्की जिल्लाको माछापूच्छ्रे र सर्दीखोला गाउँपालीकामा अवस्थित ३२ मेगावाट उत्पादन क्षमता भएको करुवा सेती हाइड्रोपावर परियोजनाबाट बैंकले आफ्नो लगानी सुरु गरेको हो । बैंकले सुरुवाती रुपमा आफ्नो अगुवाई तथा हिमालयन
बैंकिङ खबर । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जा २७ दशमलव ४ प्रतिशतले वृद्धि भएको उल्लेख गरेको छ । गत वर्ष औद्योगिक क्षेत्रमा भएको कर्जा प्रवाह ८ खर्ब ३ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ थियो । यो वर्ष पनि यस्तो कर्जामा उच्च
पुरानोलाई खारेज गर्दै कमोडिटीज बजार सञ्चालन गर्न नयाँ आवेदन आवहान
बैंकिङ खाबर । वस्तु विनिमय (कमोडिटी) बजार सञ्चालन गर्न नेपाल धितोअजत्र बोर्डमा पाँच वटा कम्पनीहरुले आवेदन दिएका थिए । बोर्डले वस्तु बजार सम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम (५) बमोजिम उक्त कम्पनीहरुले सम्पूर्ण कागजात तथा विवरणहरु पेश नगरेकोले स्वीकृति नदिएको जनाएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार, औद्योगिक व्यवसायको विकास, वस्तु कारोवारको सम्भाव्यता तथा लगानीकर्ताको हित संरक्षणलाई
बैंकिङ खबर । प्रदेश नम्बर ३ को विकास र समृद्धिको लागि शुक्रवारदेखि चितवनमा लगानी सम्मेलन शुरू भएको छ । प्रदेश सरकारले निजी क्षेत्रलाई लगानीको आह्वान गर्न चितवनको भरतपुरमा वैशाख ६ र ७ गते लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको हो । प्रदेश ३ को नीति तथा योजना आयोगको आयोजनामा उक्त लगानी सम्मेलन हुन लागेको हो । कार्यक्रममा
बैंकिङ खबर । नेपाल लगानी सम्मेलन २०१९ सम्पन्न भएको छ । शुक्रबार बाट राजधानिमा शुरु भएको लगानी सम्मेलन शनिबार साँझ समापन भएको हो । सरकारले शोकेसमा राखेका विभिन्न ७७ परियोजना मध्ये विदेशी लगानीकर्ताले १७ वटा परियोजनामा लगानी गर्न इच्छा देखाएका छन् । लगानी बोर्डका सिईओ महाप्रसाद अधिकारीले समापन समारोहमा बोल्दै १६ वटा परियोजनाको लागि १७
लगानीका लागि १७ वटा परियोजनामा आवेदन, १५ वटामा सम्झौता
बैंकिङ खबर । सरकारले शोकेसमा राखेको विभिन्न ७७ परियोजना मध्ये विदेशी लगानीकर्ताले १७ वटा परियोजनामा लगानी गनइ इच्छा देखाएका छन् । बोर्डको वोबसाइटमा १७ जना आवेदन परेको देखिएको छ । उनीहरुले लिखित रूपमै लगानी गर्ने इच्छा देखाएका छन् । १५ वटा परियोजनामा भने विभिन्न कम्पनीसँग सम्झौता भएको छ । लगानी वोर्डका अनुसार सरकारले तोकेको राजश्व
चौधरी ग्रुपले चारवटा परियोजनामा वैदेशिक लगानी ल्याउने
बैंकिङ खबर । लगानी सम्मेलनमा चौधरी ग्रुपले एकैपटक ४ वटा लगानी सम्बन्धी समझदारीपत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर गरेको छ । ग्रुपले मिल्टी मोडल लजिस्टिकका सर्राफ ग्रुपसँग एमओयू गरेको छ । ६ सय मेगावाटको सोलार प्लान्टमा लागि क्यानडाको स्काइ पावर कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ । सिजी टेलिकममा टेलिसेल साझेदारीको रुपमा आउने सम्झोता भएको छ ।
लगानी सम्मेलनलाई प्रतिपक्षको साथ, उत्पादन र क्वालीटी विजनेशमा लगानी गर्न पुर्व अर्थमन्त्री महतको आग्रह
बैंकिङ खबर । पुर्व अर्थमन्त्री तथा प्रमुख प्रतिपक्षि दल नेपाली कांग्रसका नेता डा. रामशरण महतले नेपालमा उत्कृष्ट लगानीको वातावरण रहेकोले विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी गर्न आग्रह गरेका छन् । लगानी सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै पुर्व अर्थमन्त्री महतले सरकारले अगाडी सारेका उर्जा, पर्यटन, कृषि लगायतका सात वटा क्षेत्रमा लगानीको लागि अपार सम्भावन रहेको र विदेशी लगानीको सुरक्षाको
लगानी सम्मेलन २०१९ सुरु, नेपालमा लगानीको असिमित सम्भावना : प्रधानमन्त्री
बैंकिङ खबर । सरकारले आयोजना गरेको नेपाल लगानी सम्मेलन २०१९ सुरु भएको छ । नेपालमा विदेशी लगानी भित्राउने उद्देश्यले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनको उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका छन् । काठमाडौंमा आयोजित विशेष समारोहकाबीच लगानी बोर्डका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार बिहान सम्मेलनको उदघाट गरेका हुन् । सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री आलीले नेपालमा
लगानी सम्मेलनको तयारी पुरा, एक दर्जन एमओयू हुँदै
बैंकिङ खबर । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले लगानी सम्मेलनको तयारी सम्पन्न भएको बताएका छन् । चैत्र १५ र १६ गते काठमाडौंमा हुन लागेको सम्मेलनमा सरकार र निजी क्षेत्रको गरी ७७ वटा परियोजनाको प्रस्ताव पेश गरिने छ । जसमध्ये सरकारका ५० वटा र निजी क्षेत्रका २७ वटा परियोजना रहेका छन् । नेपाली लगानीकर्ताहरुको आवाश्यकता, माग तथा उद्देश्य
‘लगानी सम्मेलन नेपाललाई विश्व सामु चिनाउने अवसर’ अर्थमन्त्री
बैंकिङ खबर। अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल वास्कोटा र निजी क्षेत्रलाई राखेर लगाानी सम्मेलनको बारेमा जानकारी गराएका छन् । निजी क्षेत्रबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर आफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्षहरुको सहभागिता रहेको थियो । अर्थमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै लगानी सम्मेलनले नेपालललाई विश्व सामु चिनाउने अवसरको रुपमा उपयोग
बैंकिङ खबर । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र अपिपावर कम्पनीबीच ४० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता भएको छ । सम्झौतामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र अपिपावर कम्पनीका तर्फबाट कार्यकारी सञ्चालक संजिव न्यौपानेले हस्ताक्षर गरेका छन् । प्रदेश न. ७ को दुर्गम जिल्ला दार्चुलामा कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको
बैंकिङ खबर। विदेशी लगानीमा सञ्चालन हुने आयोजना र उद्योग व्यवसायमा हुने डलर जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले नियमावली बनाई परित गरेसँगै हेजिङ्ग फण्ड सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ । राष्ट्र बैंकले ‘हेजिङ्ग सम्बन्धी नियमावली, २०७५’ सार्वजनिक गरिसकेको छ । नियमावली अनुसार हेजिङ्ग फण्डको सुविधा लिन चाहने कुनैपनि परियोजनाले प्रचलीत संघीय कानून बमोजिम विदेशी लगानी गर्ने र
१९ जलविद्युत आयोजनामा जनताको १ खर्ब ६० करोड रुपैयाँ लगानी
बैंकिङ खबर। सरकारले जनताको लगानी अन्तर्गत १९ वटा जलविद्युत आयोजना बनाउने भएको छ । प्रदेश १ मा १ हजार ७ सय ५१ मेगावाटका ६ वटा आयोजनामा जनताको लगानी ५१ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको हुने छ । प्रदेश २ मा कुनैपनि जलविद्युत आयोजना निर्माण हुने छैन् । प्रदेश ३ मा जनताले २ वटा अयोजनामा ३ अर्ब
पूर्वाधार बैंकले यसरी गर्छ कामः ५ वर्षका लागि न्यूनतम १ करोड निक्षेप लिने र ठुला पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने
बैंकिङ खबर। नेपाल राष्ट्र बैंकले पूर्वाधार बैंक सञ्चालनका लागि सोमबार स्वीकृतिको प्रमाणपत्र दिएको छ । यससँगै पूवार्धार बैंकले आफ्ना आगामी योजना समेत सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले देशको पूवाधार विकासका क्षेत्रमा लगानी गर्ने छ । यातायात, कृषि, जलविद्युत, उर्जा, पर्यटन, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) आधुनिक शहर पूर्वाधार तथा सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा लगानी गर्ने छ ।